Natao hanondroana zavatra ivelan'ny mahazatra | Martech Zone
Talata, Aprily 13, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Ny zanako dia maneso ahy foana noho ny fitiavako sarimihetsika mihetsika - tsy dia ampy ahy izany. Raha nijery an'i Madagascar 2 aho dia tiako ity sehatra ity izay manomboka mirehitra sy miala ny jiro mena… jereo ny fomba nitantanan'ireo penguin tao anaty kodiarana:
Ratsy loatra ny hoe tsy manana jiro mena manjelanjelatra foana i Analytics "natao hanondroana zavatra tsy mahazatra" ary koa ireo boky momba ny fanamboarana azy ireo. Mazava ho azy - na dia nanao aza izy ireo - raha mbola nanidina ny fiaramanidina dia mety nisafidy ny tsy hanao na inona na inona izy ireo.
Ny fikambanana koa dia manintona ny maro an'isa (toa ahy!). Ny olana dia matetika misy tantara ao anatin'ny isa izay tokony hikapoka takamoa mena. Asanao amin'ny maha-Marketer anao ny mahita azy ireo… angamba fidinana lehibe amin'ny fifamoivoizana teny lakile, na tranokala manondro izay tonga tampoka.
Ny akaiky indrindra antsika amin'ny boky torolàlana dia ny toro-hevitra mitohy ataon'ny olon-tiana Avinash Kaushik ary fomba fanao tsara indrindra amin'ny analytics bilaogy. Inona no karazana jiro mena hitanao (na tsy noraharahaina) ao amin'ny Analytics?
Angamba tokony hanao zavatra momba izany ianao alohan'ny hidinan'ny fiaramanidina! Sa hitanao ho “tsara tarehy sy somary hypnotic” ny Tatitry ny Analytics?
Tags: AnalyticsMadagasikarabokotra mena